Niainga tamin'ny sabotsy tolakandro mahafinaritra dia midika fanaintainana sy famoizana ain'ireo mpandeha Amtrak any Montana
Home » Lahatsoratra farany farany » Fitsangatsanganana an-dalamby » Niainga tamin'ny sabotsy tolakandro mahafinaritra dia midika fanaintainana sy famoizana ain'ireo mpandeha Amtrak any Montana
Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Vaovao • People • Fitsangatsanganana an-dalamby • Tourism • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News • Etazonia Vaovao Vaovao
Androany, fara fahakeliny, olona 3 no maty, maherin'ny 50 no naratra teny amin'ny fiaran-dalamby Amtrak any Montana taorian'ny fiaran'ny fiara efatra.
Fiarandalamby iray any Amtrak no nankany amin'ny derails any Miami, akaikin'ny Mobile, Alabama, ary namono olona 47 ny 22 septambra 1993. Ny lozam-pifamoivoizana nahafaty olona betsaka indrindra teo amin'ny tantaran'i Amtrak dia nateraky ny mpandraharaha fitetezam-boho tsy mitandrina sy toe-javatra manjavozavo.
Olona maromaro no maty, 50+ naratra androany tao anaty lamasinina #Amtrak any #Montana
Niainga ny fiarandalamby avy tany Chicago nankany Seattle
Fiara efatra farafahakeliny no voadona
Fiaran-dalamby mpandeha iray amtrak miasa eo anelanelan'ny Seattle sy Chicago no nivily lalana tamin'ny sabotsy tolakandro tao avaratra-afovoan'i Montana, araka ny fampitam-baovao avy any an-toerana sy ny media sosialy.
Lanitra manga teny ambonin'i Montana iny raha mpandeha 147 tamin'ny fiaran-dalamby Amtrak no lasa niharan'ny delestazy. Mpandeha maromaro no mbola voafandrika.
Ny lamasinina dia niankandrefana nankany Seattle, nivily lalana teo anelanelan'ny fijanonana Havre sy Shelby any Montana.
Niainga ny lamasinina tokony ho 1 km miala an'i Joplin, Montana, tanàna misy olona 200 eo ho eo.
Nisy nanatri-maso nandefa fiara efatra farafahakeliny voahitsaka sy teny an-dalana. Eo an-toerana ireo mpamaly voalohany.
Amin'izao fotoana izao dia maty 3 no naratra ary maratra maro.
Ny lozam-pifamoivoizana lehibe farany teo Amtrak dia voarakitra tamin'ny 4 Febroary 2018, tao Casey, Caroline atsimo, raha nifandona ny fiaran-dalamby iray nijanona tamin'ny fiaran-dalamby mpitatitra entana CSX.
Ny manam-pahaizana momba ny fiarovana koa dia manoro hevitra ny hisafidy seza miatrika aoriana rehefa mitaingina lamasinina. Izany dia satria ny olona mipetraka eo dia tsy dia azo atoraka mandroso mandritra ny fifandonana. Ny lamasinina dia mazàna mamely zavatra manara-dia noho ny lohany na avy any aoriana.